निषेधाज्ञामा शरीरको भोक कसरी मेट्ने
आईतबार २ जेठ, २०७८
सोमबार २० ब‌ैशाख, २०७८
काठमाडौ । निषेधाज्ञाले गर्दा अहिले मानिसहरु फुर्सदिलो भएका छन्। के गरेर समय बिताउने ? धेरैमा छट्पटी पनि बढेर गएको छ। निषेधाज्ञाको समयलाई सिर्जनशील रुपमा बिताउन नजान्दा शारीरको भोकमा झनै बढी ध्यान गइरहेको छ ।
तनावका बेला अन्य कार्यमा रुचि नजाने र यसलाई नै आनन्द र मनोरञ्जनको प्रमुख माध्यम बनाउन सक्ने जोखिम पनि बढेर जान्छ। यो कार्यका बेला मस्तिष्कबाट अक्सिटोसिन, डोपामिन, एन्डोरफिनजस्ता खुशी र आनन्द दिने रसायनिक तत्वको उत्पादन हुन्छ। यसकारण पनि व्यक्ति यौ’नाक’र्मप्र’ति बढी लालायित हुन पुग्छ।
जैविक तथा मानसिक दुवै हिसावले यो कार्य मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण पनि हुन्छ। तर, निषेधाज्ञा र सेल्फ क्वारेन्टाइनको कारणले व्यक्तिको यौ’नजी’वनमा समेत प्रभाव परेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।
कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले जोडीमध्ये कुनै एक जनामा कोरोनाको संक्रमण रहेछ भने अर्कोलाई सर्ने जोखिम हुन्छ।
यो क्रियाकलापका दौरान गरिने कार्यहरुले जोखिम झनै बढाउँछ। यद्यपि कोरोना यही कार्यबाट सर्ने रोग भने होइन।
तसर्थ जोडीहरु, जो लामो समयदेखिसँगै बसिरहेका छन् र दुवैमा कोरोनाका कुनै लक्षण र आशंका देखिएका छैनन् भने निषेधाज्ञाको समयमा पनि सुरक्षित रुपमा सबै कार्य जारी राख्दा कुनै बाधा नपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। तर, यो समयमा अपरिचितसँग भने असाध्यै जोखिमपूर्ण हुन्छ। यसैले कल्पना समेत नगर्न आग्रह गर्दछन् ।
हजुरआमा र नातिको भिडियो भाइरल [ भिडियोसहित ]
रोकिने डरले कोरोनाका लक्षण लुकाएर विवाह गरे तर विहेको ८ दिनमा नै यो संसार छोडेर गए
सम्बन्ध टिकाउन धन ठूलो की मन ? विश्वका धनी बिल गेट्सको श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद
कोरोना संक्रमणले सास फेर्न नसकेर आमा छट्पटिएपछि छोरीले आफ्नै मुखबाट दिइन् अक्सिजन
कोरोनाले निम्त्याएको कहर : जो पहिला पाइलट थिए आज फूड डेलिभर बन्न बाध्य
एउटा साइकलले यी महिलाको कमाइ कसरी तीनगुणा भयो : इज्जत फ्यालेर हैन गरेर खान सिकौँ
भाग्य चम्कियो : खेत खन्दा गरगहनाको भण्डार भेटिएपछि
जरुरी हुन् तर राति भुलेरपनि नगर्नुहोस् घरका यी काम, जान्नुहोस् वास्तुले के भन्छ ?
वास्तु विज्ञानका यी १० सल्लाह आजै अनुसरण गर्नुहोस्, तपाईं घरमा आउनेछ खुसी बहार
अमेरिका स्थायी बासी, अष्ट्रेलिया डिपेन्डेन्ट र विदेश सेटलका लागि केटा केटी चाहियो [ फोननम्बर सहित ]
हरेक केटाले सामान्य ठान्ने यी कार्यहरु केटीलाई पटक्कै मन पर्दैन
एकै कोखका ६ छोरी पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक : बने कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियाका सरकारी जागिरे
प्रेम थाहा पाएर घरबाट निस्किन प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रेम जोडीले लगाएको जुक्तिले सबैले स्वीकारे
पहिलो डेटमा नै पार्टनरलाई आफ्नो बशमा पर्ने यी उपाय जान्नुहोस्
जबरजस्ती गरेको विवाहपछि कोरोना गाउँभरी फैलियो, बेहुलाको मृत्यु, बेहुली सहित १ दर्जन बढी संक्रमित
त्रिविद्धारा भर्खरै नतिजा प्रकाशित [ नतिजा हेर्ने तरिकासहित ]
राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन आह्वानमा ओलीको सुविधाका लागि ठूलो त्रुटी भो : भिमार्जुन आचार्य
चीनले कोरोना कहर नै मौका हो भन्दै सगरमाथाको चुचुरोमा एकल कब्जा गर्न थाल्यो [भिडियोसहित]
त्रिविद्धारा देशभरीका क्याम्पसहरुलाई अति जरुरी सूचना जारी [ सूचनासहित ]
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय
यो अवस्थापछि प्रचण्डकी बुहारीको सासुको छुच्चोपनमा टिक्न सक्दिनस् भन्नेलाई भावुक शब्दमा जवाफ
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्धारा अत्यन्तै जरुरी सूचना प्रकाशित [ सूचनासहित ]
सयौँ लाश नदीमा बग्दै आउँछन् : नेपालको सीमामा संक्रमण भयावह हुँदा किन नियन्त्रणमा चासो छैन ?